Vavaka ho an'i San Roque.? Masina ho an'ny fotoanan'ny areti-mandringana.
Vavaka ho an'i San Roque Fitaovam-piadiana mahery vaika ho an'ireo rehetra mila fitsabahan'ny Tompo amin'ny toe-javatra sasany izay mety hipoitra eo amin'ny fiainana na mivantana na ankolaka.
Ny fahefana ny vavaka Tsy azo isaina izany, miaraka amin'izy ireo isika dia afaka mahazo fandresena izay raha tsy izany dia tsy ho resy mihitsy.
Ny fepetra takian'ny vavaka mba hahomby dia ny fanatanterahana izany amin'ny finoana, tsy afaka mangataka izany fotsiny isika, fa manao izany amin'ny finoana amin'ny fo, amin'ny fomba marina sy azo antoka izay ho azontsika ny valiny.
San Roque amin'ny maha-mpikarakara mahatoky azy ny olona sahirana dia afaka mahatakatra ny fahoriantsika raha misy ny aretina.
Aoka hampiasa an'ity fitaovana ity isika ary hivavaka fa homena antsika ireo fahagagana izay ilaintsika be ireo amin'ny fotoana tonga lafatra nataon'ilay Andriamanitra Mpamorona.
1 Vavaka ho an'i San Roque Iza moa i San Roque?
1.1 Vavaka ho an'ny mpiambina ny biby any San Roque (very)
1.2 Vavak'i San Roque ho an'ny alika marary
2 Rahoviana aho no afaka mivavaka?
3 Mahery ve ity olo-masina ity?
Vavaka ho an'i San Roque Iza moa i San Roque?
Ny tantara dia milaza fa izy dia zanaky ny governemantan'i Montepellier ary teraka tamin'ny 1378. normal ny fiainany ary Maty ny ray aman-dreniny tamin'izy 20 taona.
Amin'ny maha-kamboty tanora azy dia natokana hikarakarana ny marary ny iray amin'ireo bibikely mpandrava efa naratra tamin'izany fotoana izany i Roque.
Ny tantara dia manondro fa, rehefa nikarakara ireo marary ireo izy dia maro ireo nahazo fanasitranana feno sy nahagaga rehefa nanao azy lakroa teo amin'ny handriny i San Roque.
Tsy mahagaga izany satria hitantsika ao amin'ny soratra masina fa ny fanasitranana dia azo ampitahaina amin'ny aloka, tahaka ny zava-nitranga tamin'ny apostoly Petera.
Noho izany ny fahafahan'ny olona iray dia afaka manasitrana ny fanasitranana raha tsy misy famantarana ny hazo fijaliana fotsiny dia fihetsika izay ahafahantsika mino fa fahagagana izay avy amin'Andriamanitra.
Ankalazaina isaky ny 16 aogositra ny androny.
Vavaka ho an'ny mpiambina ny biby any San Roque (very)
Ilay mpamindra fo Saint Roque,
olo-masina, be famindram-po sy mahagaga,
dia nanolotra ny tenanao sy ny fanahinao ho an'Andriamanitray ianao
ary tianao ny biby tao am-ponao
Ary noho izany dia mpiambina be voninahitra ianao,
aza avela izy ireo raha tsy mila fanampiana rehefa mila izany
aza avela hahatsiaro ho tsy afa-manoatra izy ireo manoloana ny zava-tsarotra
ary omeo azy ireo izay ilainy mba hivelomany.
Mivavaha amin'ny Tompo ho sitraka sy fitahiana ho an'i Franchesca
ary tazomy eo ambany fiarovanao sy fiambenana azy mandritra ny androm-piainany.
Mpikambana iray ao amin'ny fianakaviana ihany izy,
Izy no namako sy sakaizako,
Izy no manome ahy ny fitiavany tsy misy fepetra
Mahatoky sy mampionona ahy izy ary mampifaly ny androko
ary manome be lavitra noho izay azony aho.
Saint Roque, mpanompon 'ny Tompo malalany sy be voninahitra.
fa natolotry ny alakamisy ianao
rehefa nandao anao ny olona noho ny aretinao.
nitondrany tamim-pahatokiana isanisany isan'andro ianao
ary am-pitiavana no itondranao ny aretinao hanamaivana ny fanaintainanao
ary noho izany dia mpiaro ny biby ianao,
Androany dia manantena anao aho feno fahatokisana
ary fantaro fa tsara sy tsara fanahy ianao
Natolotro anao any Franchesca ny biby fiompiko.
Fahagagana San Roque, mpiaro ny biby rehetra,
Androany aho manantona hamonjy ahy amin'ny fahoriako,
ampiasao ny herinao amin'ny fanelanelanana eo anatrehan'Andriamanitra
ka amin'ny famindram-pony no ametrahany ahy
Inona no angatahiko amin'ny foko ho an'ny biby fiompiko:
Arovy izy mba faly foana,
miambena i Franchesca malalako
tsy ampy sakafo izy, tsy matory, tsy orinasa, tsy lalao,
arovy izy amin'ny ratsy rehetra, amin'ny loza rehetra sy ny toe-javatra ratsy;
Aza malahelo na mahatsiaro avela
tsy ho diso fitiavana, fikarakarana ary fisakaizana intsony
ka tsy mahatsiaro tahotra na tahotra, na manirery,
asio fitiavana sy fifanajana hatrany
hiaina am-pifaliana sy mirary soa
ary hanana fiainana lava sy sambatra.
Mangataka aminao aho, tahina Saint Roque noho ny fahasalamanao,
lavitra ny aretina Franchesca,
avy any an-danitra ny fanasitranana,
matoky sy matoky tena aho, avelako eo an-tananao io.
ataovy azy haverina tsy ho ela ny heriny sy ny heriny
ka tsy hijaly intsony izy,
aza avela hijaly na hijaly izy,
Manamaivana ny fahorianao, manasitrana ny ratra na aretinao.
Misaotra ny fanampianao aho amin'izao fotoan-tsarotra izao,
Fantatro fa tsy hitsahatra hiaro sy hikarakara an'i Franchesca ianao
ary raiso amin'ny Tompo ny fangatahako,
izay namorona ny zavamananaina rehetra izay misy mponina amin'ny planeta
ary amin'ny fitiavana sy ny hatsaram-panahy, dia miaro sy mamonjy amin'ny zavaboariny rehetra izy.
Izy no patron ny aretina iharan'ny omby, alika, olona sembana, valan'aretina ary zava-tsarotra hafa amin'ny resaka fahasalaman'ny olona sy biby.
Ny fiangonana katolika dia nanamboatra vavaka na modely mivavaka izay mety amin'ny toe-javatra itondran'ireo biby mijaly ka mila fahagagana avy amin'Andriamanitra.
Mba hahatonga an'io vavaka io dia tsy ilaina ny fanomanana ny tontolo iainana na dia afaka mandrehitra labozia vitsivitsy ianao na manao alitara manokana ho an'ity olo-masina ity.
Azonao atao ny mivavaka irery na amin'ny ankohonanao, izay ilaina ary tokony hotandremana amin'ny fotoana rehetra dia ny finoana.
Vavak'i San Roque ho an'ny alika marary
Masina, mpivavaka be, izay nanampy marary mararin'ny pesta, Saint Roque, izay, noho ny famindram-pon'Andriamanitra, dia nanao fahagagana, izay ninoany ny herinao manasitrana ...
Miangavy anao aho, amin'ny fanetren-tena marina, ampio aho hamonjy ny alika sy ny sakaizako mahatoky, ______, tamin'ny aretina, izay nanalemy azy indrindra, nanao azy, nasandratra ary saro-pady ...
San Roque, tena tianao ny alika, fa ny alikako dia manasitrana ary mihazakazaka indray toy ny taloha.
Ny alika koa dia noharian'Andriamanitra ary mendrika ny hojerentsika sy hikarakarana azy.
Amin'ny fotoana iray izay mandia ny fotoan-pahasalamana ny biby fiompintsika dia afaka manangana vavaka ho an'i San Roque izahay hikarakara ilay biby ary hanome azy ny fahagagana hahasitrana.
Azontsika atao koa ny mangataka an'ireo biby marary an-dalambe ireo ka ity olo-masina malala-tanana sy mahagaga ity dia manome azy ireo ny fahasalamana sy fikarakarana ilain'izy ireo.
Ny fotoana tsara indrindra hivavaka dia ao amin'ny mahatsapa ny ilaina hatao.
Ny tenin'Andrimanitra dia miresaka amintsika momba ny vavaka ary milaza amintsika fa, isaky ny mila fanampiana isika, dia vonona hihaino ny vavaka ataontsika ny Ray any an-danitra.
Avy eo azontsika an-tsaina fa tsy misy fandaharam-potoana voafaritra na dia misy aza manome torohevitra ny hanao izany. ny maraina sy miaraka amin'ny fianakavianaNy marina dia azo atao na amin'ny fotoana rehetra na amin'ny toerana rehetra.
Mahery ve ity olo-masina ity?
Eny, satria fony mbola velona izy, dia izy ihany koa no niharan'aretina mitovy amin'ireo izay nokarakarainy ary tsy ela taorian'izay dia nahazo fanasitranana ary nanohy nikarakara marary marobe amin'ny hopitaly samihafa.
Nanomboka teo ka hatramin'izao dia mino ny fahefany mahagaga izy mba hanampiana ireo ambany kokoa mankasitraka.
Ataovy antom-bavaka ilay vavahady San Roque momba ny biby very sy marary manana finoana be.
Mivavaha koa Io vavaka mahery io
Vavaka mahery vaika ho an'i Saint Michael ilay Arkanjely
Vavaka ho an'i San Alejo isan'andro